Eyona ntlanzi yamanzi ilungileyo kwi-aquarium yakho | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Amanzi akwariyam akwariyam
Ukuba ulungiselela okanye ucinga ukuseta i-aquarium efanelekileyo, Kuya kufuneka uqale ucinge ukuba loluphi uhlobo lwentlanzi oza kulazisaKuba ukhathalelo ekufuneka ulunike luxhomekeke kubo, imeko yetanki leentlanzi ekufuneka ibenalo, iya kuba ntle kangakanani, ukuba iintlobo ziyakhuphisana okanye ziyavana, njl.
Kukho iintlobo ngeentlobo zeentlanzi zamanzi amnandi ehlabathini esinokukhetha kuzo xa sisakha itanki lethu leentlanzi. Njengoko benditshilo ngaphambili, ngokuxhomekeke kubungakanani bentlanzi, izixhobo itanki enazo kunye nezinye izinto, ezinye iintlanzi ziya kulungelelana ngcono kunabanye kwiimeko ezinjalo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba loluphi uhlobo lweentlanzi ezikulungeleyo ukuziqhelanisa neetanki zentlanzi?
1 Intlanzi yasemanzini
2 Eyona ntlanzi ilungileyo kwi-aquarium yakho
2.2 Iintlanzi zeTang
2.4 Intlanzi yekati
2.9 Ukuphuza uGourami
2.12 Iibhaluni iintlanzi
2.15 Intlanzi yomnyama
2.19 Intlanzi yezihlwitha
Zininzi iintlanzi zamanzi angenasawoti ezingenakuhlala kwiindawo ezinamanzi ezincinci kakhulu, kuba bafuna indawo enkulu ukuze bakwazi ukuhlala. Mhlawumbi abayidingi, kuba ubabonelela ngokutya kwaye akukho mfuneko yokuba bazikhusele okanye bazikhusele nakweyiphi na irhamncwa, kodwa yindlela yokuphila (yimfuneko yoko) ukuba ezi ntlobo zeentlanzi zinazo Bamele bahlale kwi-aquarium enkulu.
Kuyaziwa ukuba phantse iintlanzi azinako ukuhlelwa ngokufanelekileyo. Ukuthanda, imibala. Kukho abantu abathanda ezona ntlanzi zibetha kakhulu, abanye bathanda ezona ntlanzi zide, njl. Kukho iintlobo ngeentlobo zeentlanzi esinokuzibeka kwiindawo zethu zasemanzini, nangona kunjalo, ndiza kuzama ukukunika uluhlu lweyona ntlanzi intle kakhulu ngokutsho iimeko zayo, inkathalo ekufuneka siyinike yona, ukuziqhelanisa nayo kwaye, kuya kuzanywa, ukuba ubuhle.
Eyona ntlanzi ilungileyo kwi-aquarium yakho
Njengoko besenditshilo ngaphambili, zininzi iintlobo zeentlanzi zamanzi amdaka ezingahambelaniyo. Kungenxa yoko le nto kufuneka ugcine engqondweni ukuba nangona bevela kuluhlu endiza kukunika lona, ​​oko akuthethi ukuba bonke banokuhlala kunye. Sithetha ngeentlobo zezilwanyana ezisetyenziselwa ukukhuphisana ngokutya, indawo, njl. Ke asinakuqinisekisa ngokuziphatha okuhle kwazo zonke iintlanzi eziphakathi kwazo.
Kubalulekile ukuba ngaphambi kokwenza i-aquarium yethu kunye neentlobo zeentlanzi esizikhethayo, siqale sidibane nomthengisi wevenkile yezilwanyana zasekhaya. Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba zeziphi iintlobo onokuzenza okanye ongakwaziyo ukuzazisa kwi-aquarium efanayo ngaphandle kokuvelisa naluphi na uhlobo lwengxaki.
Siqala ngeeKillis. Ezi ntlanzi zihlala kwiintlobo ezahlukeneyo zamanzi, Kungenxa yoko le nto benolungelelwaniso olukhulu. Azinalo ukhuphiswano oluninzi, ke ngekhe ube nengxaki yokuziqhelanisa nezinye iintlobo zeentlanzi. Uninzi lwamarhamncwa alunakuzihoya ezi ntlobo. Kukho inani elikhulu lemibala ukunika ukubonwa kobomi kwi-aquarium yakho.
Ezi ntlanzi zincinci kakhulu ngobukhulu, kodwa zinemibala. Zikulungele ukwenza umahluko phakathi kweentlanzi ezinkulu kunye neentlanzi ezincinci. Ezi ntlanzi ziya kuba nakho ukuphila kwiintlobo ezininzi zamanzi okoko nje kungekho tshintsho ngequbuliso.
Ezi ntlanzi zinkulu kakhulu. Ezinye zinokulinganisa ngaphezulu kwe-12 cm kwaye kukho imibala emininzi. Ukuba ziintlanzi ezizimeleyo kakhulu azizukuvelisa iingxaki zokuhlalisana nabanye. Azihlali zilwa okanye zilwela ukutya. Zilungele ii-aquariums ezinkulu.
ICatfish zilungele amatanki okuloba aphakathi okanye amakhulu kuba ziya kuyigcina icocekile. Kungenxa yokuba amaxesha amaninzi Bakhankasela ukutya okotyiweyo kwi-grit emazantsi e-aquarium. Kuba zininzi i-catfish, uya kufumana ngokulula enye yazo enokuhlala kakuhle kwitanki lakho leentlanzi.
Ezi ntlanzi ziyafana neekati ekuziphatheni kwazo. Bachitha imini yonke befuna ukutya okotyiweyo emazantsi e-aquarium. Nangona kunjalo, ukuba mncinci ngobukhulu, zidinga ukhathalelo oluncinci kwaye zininzi kwiindawo ezincinci zasemanzini. Banokuziqhelanisa kakhulu, ngenxa yoko banokuziqhelanisa nalo naluphi na uhlobo lwamanzi kunye nendawo yokuhlala.
Ezi ntlanzi zinobunzima ngakumbi, kodwa ziyinyani ngetanki leentlanzi. Babonisa ukubuyela umva okuthile, kwaye zi-omnivores, kwaye zondla amarhamncwa ezinye iintlanzi, kunye namantshontsho azo. Ukuze ezi ntlanzi zihlale kunye nezinye, kuya kufuneka ulumke kwitanki leentlanzi ukuba kukho isibini kunye neeicichlids, kuba ezi zinokuphelisa ukoyisa itanki leentlanzi. Ungabalawula abemi bezi ntlanzi ngobushushu bamanzi, kuba ukuba kuyabanda okanye kushushu kakhulu umntu obhinqileyo akazukukwazi ukuphuma.
Ewe, itanki yentlanzi kufuneka ineentente. Ezi ntlanzi zamanzi acocekileyo zezona zixhaphakileyo kwihlabathi. Unokufumana i-carp phantse kuyo nayiphi na i-aquarium. Ukuba luhlobo oluqhelekileyo, ikwazile ukuphuhlisa uxhathiso olukhulu kuzo zonke iintlobo zemeko-bume, yiyo loo nto zixubana kakhulu.
Olunye uhlobo lweentlanzi "ezicocekileyo". Ezi ntlanzi ziya kuyigcina itanki yakho icocekile, kuba benayo ilungu elikhethekileyo abalisebenzisela ukunamathela ematyeni kunye naselgae. Oku kwitanki leentlanzi, kwenza ukuba intlanzi ibambelele ezindongeni kwaye iyigcine icocekile ngakumbi okanye kancinci.
Olu hlobo lweentlanzi lunempawu ezithile. Ukuze babonakalise ulawulo lwabo phambi kwezinye iintlanzi, baqala "ukwanga". Benza oku kuphela ukubonisa isikhundla sabo, abanabundlobongela, ke ngekhe babe nengxaki yokuhlala nezinye iintlobo okanye namalungu ohlobo lwazo. Ezi ntlanzi, ukuba zikhathalelwe kakuhle, zingakhula ngaphezulu kwe-25 cm, nangona zifuna umgudu omkhulu. Into eqhelekileyo kukuba bafike malunga ne-10 cm.
Ezi ntlanzi kulula kakhulu ukuzigcina. Abafuni naluphi na uhlobo lononophelo olukhethekileyo kwaye ukongeza, banokuziqhelanisa kakhulu, ke baya kuba nakho ukuhlala kulo naluphi na uhlobo lwendalo. Nangona kunjalo, kukho ingxaki encinci: ezi ntlanzi zinendawo enkulu kwaye zinokuhlasela okanye zibe ndlongondlongo kwezinye iintlanzi. Oku kungasombululwa ngokuthenga ilitye elikhulu ukuze libekwe kwitanki leentlanzi. Ngale ndlela, imastacembellid iya kuhlala elityeni kwaye iyenze ikhaya lakhe. Ukuba ezinye iintlanzi azimkhathazi, akazukubangela naluphi na uhlobo lwengxaki.
Ezi ntlanzi ziya kuhlala kweyona ndawo iphezulu ye-aquarium kwaye ziya kuzama ukuzingela izinambuzane ezibuyela ngaphezulu kwamanzi. Ezi ntlanzi azibangeli ngxaki kwezinye iintlanzi. Ukuzingela izinambuzane zisebenzisa indiza yamanzi phantsi koxinzelelo.
Ziyaziwa kakhulu ngenxa yokuba inetyhefu ebaluleke kakhulu kwihlabathi. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ezi ntlanzi (izihlobo zazo) zinetyhefu. Ezi ntlanzi azinaburhalarhume kwaye zinokuhlala nezinye iintlobo ezinoxolo.
Ezi ntlanzi zinoxolo nangona zinegama elibi, kuba ii-piranhas ziyinxalenye yolu hlobo. Uninzi lwezi ntlanzi zizilwanyana ezitya utyani, kodwa ezinye azizizo. Logama nje besondlekile kwaye abayi kudala ngxaki.
Luhlobo olungaphantsi lwekhaphethi. Ezi ntlanzi zihlala zincinci. Amadoda zezona zinemibala egqamileyo ke zilungile ukongeza ukubamba umbala kwi-aquarium yethu. Abayifuni inkathalo ekhethekileyo yalo naluphi na uhlobo.
Njengoko igama labo libonisa, ziintlanzi ezinemibala emininzi. Ezi ntlanzi azifuni nkathalo Kwaye ngokukhanya okufanelekileyo, ezi ntlanzi zinokubonakala.
Ezi ntlanzi zisetyenziselwa ukuhlala kwindawo eziphantsi kakhulu kwioksijini nakumanzi amileyo, oku kwenza ukuba olu hlobo lweentlanzi lube yintlanzi enganyangekiyo kwezinye iindidi ezinemibala. Ezi ntlanzi zilungele ii-newbies njengoko zintle, kwaye zinzima. Ukuba awukwazi ukugcina enye yezi ntlanzi iphila, wenza into engalunganga.
Ezi ziintlanzi zentlalo kwaye zifuna amaqabane aliqela ohlobo olunye ukuze baphile. Ngaphandle koko baya kuva uxinzelelo. Banoxolo kwaye bahlala beziva bengonwabanga ngamanye amaxesha. Ukuba kunjalo, bayatshintsha indlela abaziphethe ngayo kwaye bangayeka ukutya okanye ukuhamba.
Ezi ntlanzi ziqhelana kakuhle neemeko ezahlukeneyo. Olunye umahluko ophambili abanayo kunye ne-carp ngamathambo abo kunye nohlobo lwesikali esigubungela imizimba yabo. Zincinci kunesiqhelo kwaye zihlala zinazo "izilayi" zemibala eyahlukileyo.
Igama lale ntlanzi linikezelwa ngohlobo lwe-ax blade. Ezi ntlanzi ziya kuhlala ngaphezulu kwe-aquarium yakho. Uninzi lwezi ntlanzi lufuna unonophelo olukhethekileyo, kwaye ezi ntlanzi zisenokuba zezona ntlanzi kunzima kakhulu ukuzigcina emanzini.
Ngolu luhlu lweentlanzi ezihlala kakuhle, zinemibala, azidingi kukhathalelwa ngokukodwa kwaye ngokubanzi azibangeli ngxaki kwezinye iintlanzi, ndiyathemba ukuba ndikunike izimvo malunga nendlela onokugcwalisa ngayo itanki yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Eyona ntlanzi yamanzi ilungileyo kwi-aquarium yakho
UDavid Ortiz sitsho
Ukubulisa uPedro =) isihluzo se-aquarium ikakhulu ngokwenani leelitha i-aquarium yakho enayo,
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zokucoca ulwelo?
Kukho izihluzo zangaphakathi, amacebo okucoca ezantsi okanye iipleyiti, isihluzo samanzi sesiponji, ngokufutshane iindidi zilungile, jonga eyona ilungele i-aquarium yakho =)
Phendula kuDavid Ortiz
UCesar Melo M sitsho
Molo Germán, ulwazi oluhle kakhulu. Ndifuna ukukhankanya inkcukacha enye, ngokuqinisekileyo ngengozi xa besenza iphepha abalayishe umfanekiso we-bicolor labeo (Epalzeorhynchos bicolor) apho kuchazwa khona i-toxotids. Umfanekiso we-Toxotes Jaculator (Archer Fish) uya kuhambelana. Ukubulisa.
Phendula uCésar Melo M
ULuis Rondon sitsho
imibuliso ... e-venezuela loluphi olona hlobo lincinci lweentlanzi zasemanzini?
Phendula uLuis Rondon
mhle ndibathanda bonke